ZBN Nitrogendoksid matoor - Shiinaha Hangzhou Poly Air Qalabka Kala
ZBN Nitrogendoksid matoor
Mabda'a adsorption lulid Mashiinka qaadashada nitrogen cadaadis PSA Hangzhou Poly qalabka-soociddiisa oo hawada soo saarta Co., Ltd. ku salaysan yahay mabda'a adsorption lulid cadaadis, iyadoo la isticmaalayo carbon tayo sare leh shaandho kelli sida adsorbent ah, cadaadis gaar ah, wax soo saarka ee nitrogen ka hawada. Ka dib markii saabsanaa isdaahirinta, oo hawada tilmaantay Tifaftirayaasha qalalan, cadaadiska ee adsorption iyo desorption in adsorber vacuum. Sababo la xiriira saamaynta aerodynamic, heerka sida- oxygen in sie carbon kelli ah ...
Mabda'a mashiinka lulid qaadashada nitrogen adsorption cadaadis PSA
Hangzhou Poly qalabka-soociddiisa oo hawada soo saarta Co., Ltd. ku salaysan yahay mabda'a adsorption lulid cadaadis, iyadoo la isticmaalayo carbon tayo sare leh shaandho kelli sida adsorbent ah, cadaadis gaar ah, wax soo saarka ee nitrogen ka soo hawada. Ka dib markii saabsanaa isdaahirinta, oo hawada tilmaantay Tifaftirayaasha qalalan, cadaadiska ee adsorption iyo desorption in adsorber vacuum. Sababo la xiriira saamaynta aerodynamic, heerka sida- oxygen yaruna carbon kelli waa inta ka badan in of nitrogen, iyo oxygen la door adsorbed by shaandho carbon kelli ah, iyo nitrogen waa hodan wajiga gaaska. Ka dibna cadaadis la dhimay cadaadiska caadiga ah, iyo adsorbent la lifaaqan ee ogsijiin iyo nijaasta kale. goobaha guud ee nidaamka of laba munaaradaha adsorption, mid munaaraddii awoodda adsorption nitrogen, cusboonaysiinta desorption munaaraddii kale, iyada oo loo marayo barnaamijka PLC dirato si loo xakameeyo gaaska furitaanka waalka iyo xidhitaanka, si ay wareegga laba munaarado, si loo gaaro wax soo saarka si joogto ah ujeedooyin nitrogen oo tayo sare leh. Nidaamka oo dhan ka kooban yahay qaybaha soo socda: module saabsanaa isdaahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, taangi lagu kaydiyo hawada, qalab-soociddiisa nitrogen oxygen, taangiga kayd nitrogen.
1, hawada tilmaantay Tifaftirayaasha qaybood oo daahirinta
kombaresarada hawada si ay u bixiyaan hawada tilmaantay Tifaftirayaasha horeysay gudubtid qaybaha oo daahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC ka filter biibiile in meesha laga saaro inta badan oo saliid ah, biyaha, ciidda, qalajiyaha debcinta dheeriga ah oo dheeraad ah oo biyo ah, saliid filter wanaagsan, boodh, oo waxay raaceen by in filter sax aalladda isdaahirinta qoto dheer. Sida laga soo xigtay xaalad habka, nidaamka kala go'idda hawada ee hawada ah waxaa loogu talagalay set oo ah saliid hawada ka saareen qalab Tifaftirayaasha, taas oo loo isticmaalayo si looga hortago in suurtagalnimada ee wax lays saliid micro iyo siiyo badbaado ku filan shaandho carbon kelli ah. design adag ee qaybaha oo daahirinta hawada si loo hubiyo in nolosha adeeg ee carbon shaandho kelli ah. Ka dib markii la daweeyey by qayb ka, hawada nadiif ah loo isticmaali karaa hawada qalab.
22, kaydinta hawada taangiga
taangiga hawada waa in la yareeyo pulsation socodka, xafidi; oon ku yareeyo is beddel cadaadis nidaamka ah, si ay hawada tilmaantay Tifaftirayaasha habsami leh iyada oo qaybaha oo daahirinta hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, si ay si buuxda u soo saarto nijaasta ahaa oo biyo ah, yareeyo load unit-soociddiisa nitrogen oxygen PSA xiga. Isla mar ahaantaana, in munaarad nuugista in ay beddelaan, waxa kale oo ay bixisaa waqti gaaban si deg deg ah loogu qaado tirada badan ee hawada tilmaantay Tifaftirayaasha aallada-soociddiisa nitrogen oxygen PSA, cadaadis adsorption munaaraddii si deg deg ah ku kici cadaadiska shaqada, loo hubiyo in qalabka lagu kalsoonaan karo iyo hawlgalka deggan.
3, ogsijiin iyo nitrogen qalab-soociddiisa
munaaraddii adsorption la carbon gaar ah shaandho kelli waa A iyo B. Marka hawada tilmaantay Tifaftirayaasha nadiif galo tubada munaaraddii A iyo socodka dhex carbon shaandheeyo kelli in dhamaadka outlet ah, O2, CO2 iyo H2O waa adsorbed, iyo gaaska nitrogen waxaa awdeen soo baxay darafkiisa outlet munaaraddii adsorption ah. Ka dib markii muddo ah, carbon kelli munaaraddii adsorption shaandho A. Wakhtigan, A munaaraddii stop automatic adsorption, socodka hawada tilmaantay Tifaftirayaasha galay munaaraddii B soo saarka ogsijiin of nitrogen, iyo ilaa munaaraddii kor A cusboonaysiinta shaandho kelli ah. nadiifinta dhalashadii labaad ee shaandheeyo kelli waxaa ogaaday by dhaadhaca deg deg ah ku jiray munaaraddii adsorption in ay cadaadiska Hawada in meesha laga saaro adsorbed O2, CO2 iyo H2O. Laba columns ayaa sidoo kale u adsorbed iyo cusboonaadeen si uu u dhameystiro kala oxygen iyo nitrogen, iyo wax soo saarka joogtada ah ee nitrogen. habka kor ku yaal waxaa ay gacanta ku xakamaysada macquulka programmable ah (PLC). Marka dhamaadka outlet Ehelkeedu ee qiimaha go'an size nitrogen, barnaamijka PLC ah, waalka sibraar si toos ah la furay, udhigto nitrogen si toos ah aan u qalmayn, si loo hubiyo in gaaska nitrogen aan u qalmayn aanu uma ay soo qulquli. sibraar The gaaska marka la isticmaalayo sanqadh iskaamiinto engine uu ka yar yahay 75dBA.
4, kayd nitrogen taangiga
taangiga kayd nitrogen Waxaa loo isticmaalaa in lagu miisaamo ah cadaadis iyo daahirnimo ee nitrogen ka soo nidaamka kala go'idda oxygen nitrogen ka soo soocay si loo hubiyo in bixinta joogtada ah ee deggan nitrogen. Isla mar ahaantaana, in munaarad nuugo in ay beddelaan, waxaa laftiisa qayb ka mid ah gaaska xukumaya munaaraddii adsorption, nuugista munaaraddii caawimaad gacanta boost, laakiin sidoo kale door weyn ilaalinta sariirta doono, ka ciyaaraan door aad u muhiim ah in geeddi-socodka qalabka kaabayaal ah ee geedi socodka shaqada.
index Farsamada ee mashiinka qaadashada nitrogen:
Xagiisayna 3-1000Nm / h: Flow 95% -99,9995%
dhibic sayaxa: in ka yar -40 DEG C: cadaadis laysku hagaajin karo ka yar tahay 0.6Mpa
astaamaha farsamo ee mashiinka qaadashada nitrogen
1 qaybaha gudaha macquul ah, midayso qaybinta hawada, si loo yareeyo saamaynta xawaaraha sare ee hawada.
2 hagaajiyo design geedi socodka, isticmaalka natiijada ugu wanaagsan.
3 tallaabooyinka ilaalinta shaandho kelli u gaar ah in la kordhiyo nolosha ah ee carbon shaandho kelli.
4 qalabka gaaska nitrogen aan u qalmayn waaxyihiisu caaqil si loo hubiyo in tayada wax soo saarka.
5 Heerka optional nitrogen socodka, nidaam ay gacanta si toos ah, nidaamka hago.
6 fududahay in la shaqeeyaan, hawlgalka deggan, shahaadada sare ee qalabaynta, gaari karo hawlgalka saarnayn.
Baaxadda codsiga of Mashiinka qaadashada nitrogen:
Birta habka daaweynta kulaylka of gaaska ilaaliya, gaaska nitrogen iyo noocyada kala duwan ee taangiyada, isdaahirinta, gaaska dhuun warshadaha kiimikada, caag, waxyaabaha caag ah wax soo saarka, cuntada warshadaha oxygen dhammayn cusub-ilaalinta baakooyinka, warshadaha sharaabka iyo dabooli saabsanaa isdaahirinta gaaska, nitrogen wershedaha dawooyinka Baakadaha nitrogen eedeeyay iyo qiiqa oxygen weelka, qaybaha elektaroonik ah iyo wax soo saarka electronic habka warshadaha Semiconductor iyo gaaska ilaaliya. The khayroon daahirnimo, socodka iyo cadaadiska laga beddeli karaa si loo daboolo baahida macaamiisha kala duwan.
Previous: VPSA ogsijiin Vacuum matoor
Next: ZBO ogsijiin matoor
Generator ogsijiin raagaya
Hospital Generator ogsijiin
Gaaska Dabiiciga Generator Power Plant
Nitrogendoksid Generator Machine
Nitrogen Generator nitrogen Gas Plant
Ogsijiin Generator Gas
Plant Power Generator Gaas-dabiici-
Plant Psa ogsijiin Generator
Generator ogsijiin Portable
Soo saare Gas Engine Generator
Small noolaha Generator